२०७२ कात्तिक १४ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
बारा, पर्सा र रौतहटबाट ऐक्यबद्धता जारी
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ मधेस आन्दोलनको ७८औं दिन र नाकाबन्दीको ३८औं दिन पनि बारा, पर्सा, रौतहटबाट आएका व्यक्तिहरूले ऐक्यबद्धता र्‍याली निकाल्दै मितेरी पुलमा धर्ना दिएका छन् । आज वीरगंजको लक्ष्मणवा, मुर्ली चोर्नीबाट बाजागाजासहित आएको काफिला जुलुस हेर्नेहरूको सडक छेउछाउमा भीड लागेको थियो । काफिला जुलुसमा परम्परागत गीत (लाचारी) र नाचगान समावेश गरी मनोरञ्जनात्मक बनाइएको थियो । वीरगंजको पावरहाउस चोकबाट निस्किएको सो जुलुस नगरपरिक्रमा गर्दै मितेरी पुलमा पुगेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायी सङ्घ बाराले र्‍याली निकाली नारा लगाउँदै मितेरी पुलमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै मधेस क्रान्ति चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चीन सरकारलाई नेपालमा जारी मधेस आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा छिमेकीको हैसियतले चीनले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउनुपर्नेमा उल्टै मधेस आन्दोलन कमजोर पार्न नेपालभित्रै भइरहेको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनलाई देशको अखण्डतासँग जोडेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेकोमा सो कार
ओभरटाइमको विषयलाई लिएर कर्मचारी र मजदुर युनियनबीच विवाद
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई दशैं, तिहार तथा छठमा ओभरटाइम खटाउने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी तथा युनियनबीच विवाद उत्पन्न भई मूलगेटमा नै एकअर्काविरुद्ध तालाबन्दी गरेपछि सबै कर्मचारीहरू आज साँझ ६ बजेसम्म कार्यालयमा घेरिएका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरले मूलगेटको ताला फोडी सबै कर्मचारीलाई बाहिर निकालेको थियो । आइतवार दुवै पक्ष सहमति गरी कार्यालय आउन सहमत भएको वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी गराए । क्षेत्रीय कार्यालयमा अहिले पाँचवटा युनियन रहेका छन् । युनियनसँग आबद्ध कर्मचारीहरूलाई भागबन्डाको आधारमा दशैं, तिहार र छठमा ओभरटाइममा खटाइने गरिन्छ । सोही क्रममा राष्ट्रिय कर्मचारी स·ठनसँग आबद्ध कर्मचारीहरूलाई ड्युटी खटाउने सूची क्षेत्रीय निर्देशकसमक्ष लग्दा बाँकी चारवटा युनियनले विरोध गरेका थिए । सो स·ठनले गलत कार्य गरेको भन्दै अन्य कर्मचारीहरू तथा चारवटा स·ठनले मूलगेटमा तालाबन्दी गरेपश्चात् विवाद शुरू भएको थियो । कर्मचारी र युनियनबीच विवाद भइरहँद
विद्यालय सञ्चालनको प्रयास निरन्तर असफल
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ भदौ २९ गतेदेखि बन्द रहेको वीरगंजका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न भइरहेका प्रयास निरन्तर असफल भएपछि शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्ने मौलिक हक अन्योलमा परेको छ । प्याब्सन–एनप्याब्सनले जारी मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आन्दोलित दुई मोर्चामध्ये एक मोर्चा राजी हुन नसक्दा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्न नसकेको हो । सङ्घीय समावेशी मधेसी मोर्चा बन्द विद्यालय सञ्चालनका लागि तयार देखिए पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विद्यालय सञ्चालन भएमा आन्दोलन तुहाउने कार्य हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा विद्यालय सञ्चालन हुन नदिने पक्षमा अडिग रहेको कारण बन्दको ७६औं दिनसम्म भएका वार्ताहरू सफल हुन सकेका छैनन् । मोर्चाले दशैंअघि एसएलसीलाई मध्यनजर गरी कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई सादा पोशाकमा कोचिङसम्मको सुविधा प्रदान गरेको र दशैंपछि भएको वार्तामा कक्षा ९ सम्मलाई सादा पोशाकमा पठनपाठनको वातावरण मिलाउनेतर्फ सकारात्मक देखिएको छ । मोर्चाले आमहडतालको क्रममा बन्द उद्योग, विद्यालयलगायत सबै सञ्चालनको लागि दबाब आइरहेको हुँदा एउटालाई छुट दिंदा आन्दोलन भाँडिन सक्ने
आर्थिक विकासका लागि कठिन पथ
शीतल महतो हाम्रो समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।” नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ सबै दल उस्तै उस्तै हो भन्ने हुन्छ । हुनत दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आफूलाई फरकफरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्तत: लोकतन्त्रमा दलहरूलाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिविम्बको रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचारहरू हुन्छन् । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारहरूको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधताहरू रहेका छन् । त्यसैले दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वाभाविकै नै हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही नै हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आम नेपाली नागरिकले उस्तै ठान्ने गरेका छन् । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै तात्त्विक फरक पाएको छैन । सिद्धान्त जे अपनाए पनि दलहरूको चरित्र भने उस्तै उस्तै देखिएको छ । भनिन्छ, सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशानिर्देश गरिन्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन । सबै दलमा नेता, क
संविधान र राष्ट्रियता
वैद्यनाथ ठाकुर नेपालको इतिहासमैं पहिलोचोटि नेपाली जनताले आफ्नोलागि संविधान आपैंmले चुनेर पठाएको संविधानसभामार्फत् प्राप्त गरेका छन् । एक युगमा एकचोटि मात्र आउने अवसरले साँच्चै नै नेपाली समाजमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । नागरिक हकअधिकारको सवालमा वर्तमान संविधान आपैंmमा युगान्तकारी परिवर्तनको दस्तावेज भए तापनि भिन्नभिन्न राजनीतिक विचार भएका दलका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको हुनाले एक अर्थमा यो सम्झौताको दस्तावेज पनि हो । मुख्यत: नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूको फरकफरक धारणाबीच भएका सम्झौताबाट बनेको यो संविधानको सबैभन्दा असल पक्ष संविधान आपैंmमा परिवर्तनशील, संशोधनीय तथा समाजवाद उन्मुख हुनु पनि हो । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि रहँदै आएको खस पहाडी शासकीय अहड्ढारवादबाट संविधान जारी गर्न लाग्दाको समयमा शीर्ष तीन दल मुक्त हुन नसक्नु तथा देशको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसका आम नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गरी सबैको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने तहमा उठ्न नसक्नु वर्तमान संविधानको प्रमुख कमजोरी हो । अन्तरिम संविधानमा समानुपातिकता तथा समावेशिताको सवालमा राज्यको
मधेसमा यसै पनि विद्यालयहरू बन्द छन् । केही निजी विद्यालयहरूले कोचिङ क्लासको रूपमा आसन्न प्रवेशिका परीक्षाको तयारीका लागि विद्यालय पोशाकबिना अध्यापन गराउँदै आएका थिए । कलैयामा आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चा, एनप्याब्सन र विभिन्न शिक्षक स·ठनहरूको भर्खरै बसेको संयुक्त बैठकले भने विद्यालय सम्पूर्णरूपमैं बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल, खासगरी मधेस पछि पर्नुको विभिन्न कारणमध्ये एउटा सबल कारण शिक्षा हो । यस तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । साँच्चि भन्ने हो भने यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा अध्ययन–अध्यापन भएकै छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएलगत्तै देशभरि विनाशकारी भूकम्प आयो । त्यस बेला भूकम्पबाट कम प्रभावित मधेससमेत महिना दिनजति बन्द भयो । त्यसपछि छिटपुट विद्यालयहरू के खुलेका थिए, मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन शुरू भयो र आज अढाई महिनादेखि विद्यालयहरू बन्द छन् । यस बन्दीले खासगरी प्रवेशिका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई मारमा पार्ने निश्चित त छ नै, अन्य विद्यार्थीमा पनि यसले नराम्रो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने सुनिश्चित छ । घरीघरी र सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो, आन्दोलन जुनसुकै उद्द
२०७२ कात्तिक १३ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
प्रशासनको चेतावनीपछि हतियार प्रदर्शन भएन, मितेरी पुलमा ३७ औं दिन पनि नाकाबन्दी जारी
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ जारी मधेस आन्दोलनको आज ७७ औं दिन र नाकाबन्दीको ३७ औं दिन पनि वीरगंज–रक्सौल मितेरी पुलमा मोर्चाले नाकाबन्दी जारी राखेको छ भने बारा, पर्साका विभिन्न गाविसबाट जुलुससहित समर्थन गर्नेहरूको लर्को आज पनि जारी रह्यो । पर्साको परसौनीबाट रामअध्योध्या पटेलको नेतृत्वमा जुलुस निस्केको थियो भने बसडिलवा गाविसको टोल रतनपुरबाट जहुर अन्सारी, दिलमहम्मद मियाँ, वासुदेव यादवको नेतृत्वमा जुलुस निस्की आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको थियो । सिलाइकटाइ सङ्घले घण्टाघरबाट निकालेको ऐक्यबद्धता र्‍याली नगर परिक्रमापछि मितेरी पुलमा पुगेर समापन भएको थियो । हिजो रातिदेखि परेको सिमसिमे पानी र शुरु भएको जाडोको बावजुद पर्सा, बाराका विभिन्न गाविसबाट मानिसहरू नारा जुलुस गर्दै वीरगंज आएर घण्टाघरमा जम्मा भई मितेरी पुल पुगेर समर्थन गर्ने कार्यलाई आज पनि निरन्तरता दिए । आज गरिएको प्रदर्शनमा स्थानीय प्रशासनले हिजो जारी गरेको सूचनाको बर्खिलाप गरिएको छैन । प्रशासनले लाठी, फाटाबाहेक हतियार प्रदर्शनमा रोक लगाएको र बर्खिलाप गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाई गर्ने चेतावनी दिएपछि आजको प्रदर्शनमा लाठी फाटा म
पाँच बुँदे सहमतिमा राज्यले बेवास्ता गरेको ठाकुरको आरोप
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ मधेस आन्दोलनपछि सहमतिको आधारमा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित बुँदाहरू छोडेर नयाँ संविधान जारी गरेको कारण मधेसी जनता आन्दोलित भएको तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए । वीरगंजको होटल पूजनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ८ बुँदे र २२ बुँदे सहमति अनुसार मधेस स्वायत्त प्रदेश बनाउने सहमति भएको तथा राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत झापादेखि कैलालीसम्म तराई मधेसको भूभाग रहेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि सोविपरीत निर्णय गरिएको विरोधमा मधेसीहरू असन्तोष जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनले राज्यले वार्ताको नाममा मधेसीको हक अधिकार खोस्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए । हामीले नयाँ माग नराखेको, विगतदेखि माग्दै आएको वार्ता, समझदारी, सहमतिको आधारमा आन्दोलन टु·याउन प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए । तर सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको उनको आरोप छ । आज हुने वार्ता अघि नै राज्यसँग सेना परिचालन रोक्नुपर्ने, राहत, क्षतिपूर्ति, शहीद घोषणा, निश्शुल्क उपचार, थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिए मात्र वार्तामा बस्ने भनी दिएको ५ बुँदे स
विजेता क्लबलाई खशी, उपविजेतालाई बोका
प्रस, निजगढ, १२ कार्तिक/ रतनपुरी लालमा सम्पन्न फाइनल फूटबल खेलको उपाधि निजगढ युवा क्लबले हात पारेको छ । उपविजेता हिमाल युवा क्लब ‘बी’ लाई पेनाल्टी प्रहारमा ४ का विरुद्ध ५ गोल गरी निजगढ युवा क्लब विजेता बन्न सफल भएको हो । खेल अवधिभर दुवै टिमबाट कुनै गोल हुन नसक्दा प्रतियोगिताको नतिजा पेनाल्टी प्रहारबाट भएको हो । गत असोज २० गतेदेखि लाल रिटन्र्स युवा क्लबको आयोजनामा खुला प्रथम संविधान कप स्तरीय नकाउट फूटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो । नजिकिंदो विजयादशमीको अवसर पारेर गरिएको सो प्रतियोगितामा विजेता क्लबलाई एउटा खसी, ४ हजार नगद र उपविजेता टिमलाई एउटा बोका, २ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । खेल अवधिभर बढी गोलकर्ता निजगढ युवा क्लबका चतुर्धन चौधरीलाई पुरस्कारस्वरूप एउटा भाले, उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गरेबापत हिमाल युवा क्लबका गोलरक्षक दूधराज श्रेष्ठ म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व युवा तथा खेलकूदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विजेता क्लबलाई र जिल्ला खेलकुद विकास समिति बाराका अध्यक्ष दिलबहादुर लामाले उपविजेता क्लबलाई पुरस्कार तथा प्रमाणप्रत्र व
आजदेखि ड्राइपोर्टमा पनि धर्ना
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पर्सा आज साँझदेखि ड्राइपोर्ट गेट अगाडि टायर बाली प्रदर्शन गर्दै धर्ना बसेको छ । ड्राइपोर्टमा थन्किएका सामान अन्यत्र पठाउन लागेको थाहा पाएपछि धर्ना बसेका हुन् । आज साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले ड्राइपोर्टमा कार्यरत कामदारका मेठहरूलाई एकत्रित गराई सामान ओसार–पोसारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुरूप केही कामदार आज काममा लागेका र लगभग ३० भन्दा बढी ट्रक लोड गरी काठमाडौं लग्न खोज्दा मोर्चा कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेको संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी गराए ।
नागरिक विभाजित नबनौं
वीरेन्द्र यादव राजनीतिकशास्त्रले भन्छ राज्य नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकसँग नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र आफ्नो माग राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । जनताको माग जायज छ भने आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म बराबर वितरण गर्नु र अपराधजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको नीति अनुरूप कार्य गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारसँग अपार शक्ति हुन्छ भने राज्यको तुलनामा एउटा व्यक्तिको शक्ति शून्य बराबर हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका अनुसार सरकार र जनताबीच चील र कुखुराको चल्लाजस्तो सम्बन्ध हुन्छ । जसरी चीलले चल्लालाई जुन बेला पनि झम्टिन खोज्छ, त्यसैगरी सरकारले पनि जनताको अधिकार जुन बेला पनि खोस्ने प्रयास गर्छ । यसर्थ जनताको अधिकार चीलजस्तै सरकारले खोस्न नपाओस् भनेर आम जनतामा ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ । एकजना नागरिकको अधिकार सरकारले जबरजस्ती खोस्यो र त्यसमा अरू जनताले समर्थन जनायो भनेपछि समर्थन जनाउने जनताको पनि अधिकार खोस्न सरकार पछि पर्दैन र यसरी एकएक गरी जनताको अधिकार खोसेर जनता कमजोर र सरकार निरङ्कुश बन्छ । जनता कमजोर हुनुको अर्थ हो राज्य कमजोर हुनु । राज्य कमजोर भयो भने असफल ह
विश्वास र श्रद्धा जगाउनुपर्छ
देशमा एकातिर समाज परिवर्तनको रहरलाग्दो घटना भइरहेको छ भने अर्कोतिर लामो सङ्घर्षलाई सम्बोधन नगर्दा जनता पिरोलिएर परिवर्तनको स्वागत गर्ने मनस्थिति उत्पन्न हुन सकिरहेको छैन । लै·िक विभेद हटाउने तथा समावेशीकरणको जुन दुई ऐतिहासिक घटना नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा उदित भएको छ, त्यो कुनै पनि सभ्य मुलुकका लागि गर्व गर्ने विषय हो । नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै राष्ट्रको दुईवटा प्रमुख पदमा दुईजना महिला निर्वाचित हुनु सार्‍है गर्व र आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो । तर यी परिवर्तनहरू यस्तो बेलामा भएको छ, सम्पूर्ण नागरिक समाजले यसलाई आत्मसात गर्न सक्ने वातावरण धमिलिएको छ । तराईमा जारी आन्दोलन साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । तराईमा मात्र होइन, अझ बढी तराईबाहेक क्षेत्रमा बन्द र सीमा नाकाबन्दीले जनजीवनमा प्रतिकूलता ल्याएको छ । यस विरोधाभासले गर्दा संसद्को सभामुख र राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित महिलाहरूले सामूहिक गौरवको अनुभूति पाउन सकेनन् । यो परिवर्तन रुचाउने तर स्वामित्व छाड्न नचाहने अन्तद्र्वन्द्वजन्य स्वभावको परिणति हो । हिजो जसरी उपेक्षित भनिएको मधेसी मूलका दुईजना व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन
२०७२ कात्तिक १२ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
मितेरी पुलमा ३६ औं दिन पनि नाकाबन्दीलाई निरन्तरता
प्रस, वीरगंज, ११ कात्तिक । वीरगंज–रक्सौल मितेरी पुलमा विगत ३६ दिनदेखि नाकाबन्दी गरी बसेका मधेसी मोर्चाका नेता, कार्यकर्तासहित आम मानिसले आज पनि नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । साउन २९ गतेदेखि गरिएको आम हडताल र असोज ७ गतेदेखि गरेको नाकाबन्दीमा आज अन्य दिनको तुलना पर्सा, बाराबाट समर्थनमा मानिसहरू कमै आए । लगातार टयाक्टर, मोटरसाइकल, साइकल र पैदल पर्सा, बाराका विभिन्न गाविसबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मितेरी पुल पुगेर नाकाबन्दीमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । आज पनि बाराको कबही, कुहडीलगायत गाविसबाट टयाक्टरमा मानिसहरू मधेसी एकता जिन्दाबाद, मधेसको माग पूरा गर, जय मधेसको नारा लगाएर मितेरी पुल पुगी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए । प्रस, रौतहट ११ कार्तिक/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा आयोजित आम हडतालप्रति रौतहट ब्राहमण समुदायले आज सदरमुकाम गौरमा जुलुस प्रर्दशन गरी समर्थन जनाएको छ । रामजानकी धर्मशालाबाट शुरु भएको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै नेपाल–भारत सिमानामा रहेको नाकाबन्दीस्थल पुगी सहभागी भएको थियो । ब्राहमण समाज रौतहटका अध्यक्ष राधेश्याम झाको सक्रियतामा जुलुस
काठमाडौं, ११ कातिक/रासस गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी छन् । राष्ट्रपतिका लागि आज भएको निर्वाचनमा भण्डारीलाई ३२७ मत प्राप्त भएको थियो । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले भने २१४ मत प्राप्त गरे । सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा भण्डारी नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति भएकी छन् । मतगणना कार्य सकिएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपालको संविधानको धारा २९७ को उपधारा (३) बमोजिम तथा संसद्को अन्तरिम कार्यविधि, २०७२ को दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम भण्डारी विजयी भएको घोषणा गरिन् । सभामुख घर्तीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा संसद् र आफ्नो तर्फबाट भण्डारीलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरिन् । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यही कात्तिक १४ गते हुनेछ । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद्को ल्होत्से हलमा बिहान ११ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया शुरु भई दिउँसो २
वार्ताका लागि सरकार गम्भीर नभएको अध्यक्ष ठाकुरको आरोप
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, ११ कात्तिक/ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वार्ताका लागि सरकार गम्भीर नभएको दाबी गरेका छन् । कलैयामा बुधवार तमलोपाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतोले आन्दोलन तुहाउन खेलमा मात्र सरकार लागिपरेको बताए । हाम्रो माग प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूले प्रस्ट खाकासहित वर्तामा नआउनुले पनि हामीलाई शड्ढा लागेको छ–नेता ठाकुरले भने । विगतमा भएको सबै सम्झौताको पालना गर्नेतिर पनि सरकार सकारात्मक नदेखिएको आरोप लगाउँदै नेता ठाकुरले अहिले पनि मोर्चाको माग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सबै भूभाग मधेसमा हुनुपर्नेमा एकमत रहेको बताए । मोर्चा सत्ता समीकरणका लागि नभएर मधेसी जनताको अधिकारका लागि आन्दोलनमा लागेको बताउँदै भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरे । अहिलेको संविधान मधेस विरोधी रहेको बताउँदै अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले जानकारी दिए । लोकतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्राको पक्षमा तराई केन्द्रित दलहरू सधैं सकारात्मक रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टी जिल्ला अध
अङ्गीकृत नागरिकताको मुद्दा बङ्ग्याइयो : राजेन्द्र महतो
प्रस, पथलैया, ११ कात्तिक/ सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अ·ीकृत नागरिकता लिएकालाई सरकार र राष्ट्रप्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने माग मधेसी मोर्चाको नरहेको भन्दै यसलाई बङ्ग्याएर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन्। गढीमाई नगर कमिटीले बुधवार जितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतोले बजारमा प्रचार गरिएजस्तो विदेशीलाई अ·ीकृत नागरिकता दिएर सरकार र राष्ट्रप्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने माग नरहेको बताए । अन्य मुलुकबाट विवाह गरी नेपालमा आएका महिलालाई दिइने नागरिकता अ·ीकृत हुनुहुँदैन भन्ने माग मात्र रहेको महतोले प्रस्ट पारेका छन् । नेपालमा विवाह गरी आउने महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । महतोले बजारमा प्रचार भएजस्तो आफ्नो नागरिकता अ·ीकृत नभएको पनि बताएका छन् । उनले मधेसमा बस्ने मधेसीलाई भारतीय भनेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् । अ·ीकृत नागरिकतासँगै मोर्चाले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशका विषयमा प्रस्ट धारणा राखेको भन्दै महतोले त्यसलाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलन लम्बिंदै गएको बताए । मधेसमा ५० वर्षदेखि मिलेर बस्दै आएका पहाडी र मधेस
प्रस, परवानीपुर, ११ कात्तिक/ बारा जिल्लाको भोडाहा गाउँमा जारी फूटबल नकआउट प्रतियोगितामा म·लवार भएको खेलमा बाराको गढीमाई नपामा रहेको फत्तेपुर गाउँ विजयी भएको छ । फत्तेपुर युवा क्लबले श्रीपुर, मनहर्वा, पिपरा गाउँलाई ३–१ ले पराजित गरेको थियो । फत्तेपुरबाट कृपा चौधरीले तीन गोल गरेका थिए भने पिपरातर्फबाट कृष्ण अधिकारीले १ गोल फर्काएका थिए । यसैबीच आज भएको खेलमा स्टार युवा क्लब भोडाहालाई ५ गोलले पराजित गर्दै श्रीराम युवा क्लब मझौलिया विजयी भएको छ । मझौलियाका विक्रम चौधरीले २, अविनाश चौधरीले २ गोल र विन्देश्वर चौधरीले १ गोल गरेका थिए ।
क्याक्टसको फूलले सुगन्ध छर्न सक्दैन !
शङ्करमान चार तारे झन्डा दशरथ र·शालामा फरफराइएको थियो । हजारौं मानिस त्यहाँ एकात्रित भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले विजयादशमीको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापानको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त आयोजना विपी कोइराला पुस १६, २०३३ साल स्वदेश फर्केपछि मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यबाट प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ २०३५ सालदेखि काङ्ग्रेसले प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनदेखि शुभकामना आदानप्रदान गर्दै आएको हो र यसपालि पनि विपीको सिद्धान्त र आदर्शलाई निरन्तरता दिन चियापान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । तर हाँसो लाग्छ, मेलमिलाप, सहमति र सहकार्य जस्ता शब्दहरूलाई कार्यक्रमको मेनुमा राखिएको भन्दा । त्यसमा पनि उक्त कार्यक्रमले मात्र ती शब्दहरूलाई अघि सारेको थिएन, त्यस कार्यक्रमले विपीको आगमनको व्यथा पनि उजागर गरेको थियो । एकपल्ट फेरि अतीतका ती स्मृतिलाई घचघच्याएको थियो । वास्तवमा विपीको नेपाल आगमनको पछाडि मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको बेला प्रवासमा बस्नुभन्दा स्वदेश फर्केर राष्ट्रियता जोगाउन सकिन्छ भन्ने थियो । कारण–तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द
नयाँ सरकारसँग आशा
सञ्जय साह मित्र आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति खरो उत्रिंदै आएका केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको बागडोर जानुभन्दा पहिलेदेखि नै कुन किसिमको अनुमान थियो भने ओली सरकारमा गएपछि नेपाल र नेपालीले धेरै किसिमले फाइदा लिन पाउने छन् । यसको मुख्य कारण उनीमा पहिलेदेखि नै देखिंदै आएको राष्ट्रवादप्रति अडान र खरो व्यक्तित्व थियो । उनले विगतमा निकै हदसम्म गरेको सरकारको यथार्थिक आलोचना सुझावले भविष्यमा केही गर्ने नेताको रूपमा सबैमा उनीप्रति विश्वास भएको थियो । छिटो निर्णय लिने क्षमता भएको र घटनाको आफ्नै किसिमले विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी भएका ओलीले, प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले संविधान निर्माण अवधिमा देखाएको तत्परता र संविधान जारी गर्न देखाएको आतुरताले उनी प्रधानमन्त्री बन्न मात्र हतारिएको जस्तो लाग्दैनथ्यो । देशमा लामो समयदेखि जारी अस्थिरता हटाउन उनको नेतृत्व राज्यले पर्खेजस्तो अनुभूति भइरहेको थियो सर्वसाधारणलाई । वैचारिकरूपले उनीसित असहमत हुनेहरू पनि उनको त्यो खूबीको कायल थिए र उनको क्षमतालाई सर्वसाधारणसमेतको हकमा राज्यले उपयोग गर्ने अवसर पाउन लागेको अनुमान गरेका थिए । उनले निकै कठिन घडीमा देशको बाग
दशाबाट उम्कन आँट चाहिन्छ
देशलाई आज चौतर्फी दशाले घेरेको छ । यो दशा केही प्रकृतिले र केही मानवकृत अर्थात् शासकहरूको नादानीले निम्त्याएको हो । प्राकृतिक दशाले गरेको बिगार समयक्रममा सप्रँदै जान्छ, तर शासक अर्थात् राजनीतिक दलहरूको अविवेक तथा नासमझीले उत्पन्न दशा सपार्न सहज हुँदैन । किनकि मानिसमा अहं हुन्छ, इगो हुन्छ र आफूले गरेको काम गलत नै किन नहोस्, गलत भन्ने मानसिकता हुँदैन । त्यसैले नेपालले भारतबाट तीनपटक घोषित वा अघोषित नाकाबन्दी खेप्नुपरेको छ । अझ कतिपटक खेप्नुपर्ने हो, आजै अडकल गर्न सकिंदैन । किनभने तात्त्विकरूपमा नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देशप्रति माया र त्यसको संवरणको आँट उत्पन्न हुन सकेको छैन । आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने परिपाटीले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो, अन्यथा अविवाहित, पदप्रति निर्लोभी मानिएका सुशील कोइरालालाई आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पदमा उठ्नुपर्ने बाहय दबाब नै परे पनि उनको विवेक सुतेकैले उनको पार्टीले यो हविगत बेहोर्नुपर्‍यो र सहकार्यका साथी त छुटेछुटे पैचौं पाएको साथीहरूले पनि साथ दिन मानेनन् । आज राष्ट्रपतिजस्तो देशको गरिमामय पदमा लड्नका लागि काङ्ग्रेसको साथ कोह
२०७२ कात्तिक ११ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
बन्दको ७४ औं दिन रौतहटमा जन्जीर जुलुस
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ नाकाबन्दीको ३४ औं दिन म·लवार मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताहरूले नेपाल–भारत सीमा–नाका मितेरी पुलमा धर्ना जारी राखेका छन् । मधेसी हक–अधिकारको लागि आन्दोलनरत सङ्घीय समावेशी मधेसी मोर्चा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता, कार्यकर्ताहरूले असोज ७ गतेदेखि सीमा–नाका वीरगंज–रक्सौलस्थित मितेरी पुलमा धर्ना दिएर नाकाबन्दी गरिरहेका छन् । नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियम, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ लोड भएका सयौं ट्रकहरू रक्सौलको लक्ष्मीपुरदेखि सुगौलीसम्म लामबद्ध भएर रोकिएका छन् । यता माग पूरा नहुन्जेल मितेरी पुलमा जारी नाकाबन्दी नखोल्ने अडान लिएका दुई मोर्चाको अभियानमा समर्थन जनाउँदै पर्सा र बाराका गाविसहरूबाट मानिसहरू आउने क्रम आज पनि जारी रह्यो । ट्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकल आदिमा सवार भएर एवं पैदलै जय मधेसको नारा लगाउँदै मानिसहरू मितेरी पुलमा पुगेर आन्दोलनमा समर्थन जनाइरहेका छन् । गौरमा जन्जीर जुलुस प्रदर्शन प्रस, रौतहट/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका कार्यकर्ताहरूले म·लवार रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा जन्जीर जुल
मधेस नै हाम्रो राष्ट्रियता हो– ठाकुर
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ मधेसमा विगत ७४ दिन देखि जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीको ३४ औं म·लवार नेपाल–भारत मितेरी पुलमा ऐक्यबद्धता जुलुसको स्वागत गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले स्वागत गरेका थिए । जुलुसको स्वागत गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने–‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेस नै हाम्रो राष्ट्रियता हो र मधेस राष्ट्रियताको रक्षाको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौं ।” सरकारले वार्ताको नाटक गरेको र ठोस प्रस्ताव नल्याएको उनले आरोप लगाए । सरकारबाट ठोस प्रस्ताव नआएसम्म मधेसमा जारी आन्दोलन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने नेता ठाकुरले बताए । जनताको मायाभन्दा पद ठूलो हुँदैन र जनताको मायाको लागि आफू जुनसुकै पद त्याग गर्न तयार रहेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए । उनले मधेसको माग सम्बोधन नभएसम्म म र मेरो मोर्चा कुनै पनि सरकारी खेलमा नलाग्ने घोषणा गर्दै सरकारले फैलाएको अफवाहमा जनतालाई नपर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । आजको धर्ना कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, तमलोपाका महामन्त्री जीतेन्द्र सोनल, फोरम नेपालका महामन्त्री रामसहाय यादव, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य जीतेन्त्र सिंह, स
उपचार गराउन जाने नै पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ जयम·लापुर–१ निवासी सुरेश साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बच्चाको विषयमा भएको झगडामा घाइतेलाई उपचार गराउन अस्पताल आउने क्रममा प्रहरीले साहलाई पक्राउ गरेको हो । घटना विवरण अनुसार मोती साह कानु र वीरेन्द्र साह कानुका पत्नीहरूबीच बच्चाको विषयमा झगडा भएको थियो । सो झगडामा अन्य व्यक्ति साधु साह झगडा छुटाउन जाने क्रममा महिलाहरूले कुटपिट गरी घाइते पारेको बताइएको छ । घाइते साधुलाई उपचारको लागि वीरगंज ल्याउने क्रममा सुरेश साहले नै साधुलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले घटनामा सुरेश साह संलग्न रहेको दाबी गरे पनि घाइते साधुले साह घटनामा नरहेको बताए । आफूलाई उपचार गराउन ल्याउँदा सुरेश उल्टै फसेको साधुले बताए ।
भारतीय महावाणिज्य दूतावासअगाडि धर्ना
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ मधेसी मोर्चाको नाकाबन्दीको कारण वीरगंजमा फसेका भारतीय टयाड्ढर, ट्रक चालकहरूले वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासअगाडि धर्ना दिएका छन् । नाकाबन्दीको कारण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि भन्सार क्षेत्रमा रोकिनुपर्दा आफूहरूलाई समस्या परेको भन्दै उनीहरूले खाली ट्रक, टयाड्ढरहरूलाई भारत पठाउने व्यवस्था मिलाउनको लागि पहल गरिदिन वाणिज्य दूतावाससँग आग्रह गरेका थिए । नाकाबन्दीको कारण वीरगंजमा ११८ वटा भारतीय टयाड्ढर, ट्रक, बुलेटहरू रोकिएका छन् ।
कुशवाहाको शङ्कास्पद मृत्यु
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ वीरगंज–२६ सबैठवा निवासी २० वर्षीय रामदिनेश कुशवाहा म·लवार शड्ढास्पद अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । ड्राइपोर्ट–परवानीपुर सडकखण्ड गण्डक नहरदेखि दुई सय मिटर उत्तर धानखेतमा कुशवाहाको शव फेला परेको हो । स्थानीय बासिन्दा आज बिहान नित्यक्रम गर्न जाँदा मृतक कुशुवाहलाई देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । शवनजिकै ना.१६ प १२१८ नं.को मोटरसाइकल रहेको थियो । सो मोटरसाइकल कुशवाहाकै रहेको बताइएको छ । मृतक कुशवाहाको शरीरमा घाउका खतहरू देखिएका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा हत्या भएको हुन सक्ने बताइएको छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार कुशवाहा आज बिहान ३ बजे घरबाट दाइको ससुराली जान भनी हिंडेका थिए । मृतकका दाइ रामप्रसाद कुशवाहाले भाइ बिहान घरबाट आफ्नो ससुराली जान भनी निस्किएको जानकारी गराए । मृतकका परिवारजनसँगै एमाले पर्साका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रजिअ केशवराज घिमिरेसँग भेट गरी घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाई गर्न माग गरेका छन् । दोषी फेला नपरेसम्म शव नबुझ्ने परिवारजनले बताए । मृतक कुशवाहाको शव नाउक्षे
इन्धनको अवैध बिक्री बढ्दो
प्रस, वीरगंज, १० कात्तिक/ जारी मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण वीरगंजमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको चर्को अभाव देखिएको छ भने यसको अवैध बिक्री पनि बढेको छ । वीरगंजमा आन्दोलनरत दुवै मोर्चाले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पेट्रोलियम पदार्थ ५ लिटरसम्म भारतबाट ल्याउन पाउने आह्वान गरे पनि सीमा नाका र शहरका केही स्थानहरूमा मोटरसाइकलको मिटर हेर्ने, टयाड्ढी खोल्ने र बढी पेट्रोल पाएको खण्डमा खन्याएर नष्ट गर्ने जस्ता कार्य पछिल्ला दिनहरूमा चर्को गरी वृद्धि भएपनि अहिले केही साम्य भएको छ । शहरमा पेट्रोलियम पदार्थको अवैध बिक्री रोक्ने मोर्चाले बताए पनि सो रोक्न सकेको छैन । भारतीय नं.को मोटरसाइकलमा भारतको रक्सौलबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइ अवैध विक्रेताहरूलाई बिक्री गर्ने र उनीहरूले सो पेट्रोलियम पदार्थ चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । मोर्चाले विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसारमा कडाइ गरेपछि अवैध विक्रेताहरूले पेट्रोलको मूल्यमा वृद्धि गरेका छन् । नाकाबन्दीपछि १७० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको पेट्रोल अहिले वीरगंजमा २०० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ । यसैगरी ग्याँस पनि
किन हुन्छ नेपालको गरिबी अति पीडादायी ?
विश्वराज अधिकारी नेपालमा कुराकानीको क्रममा, लगभग सम्पूर्ण जनताले नै घुसखोरी वा भ्रष्टाचारको विरोध गरेको पाइन्छ तर व्यवहारद्वारा भने केवल पाँच प्रतिशत (अनुमान) मात्रले यो कुरीति वा अपराधको विरोध गरेको देखिन्छ । अर्थात् बहुसङ्ख्यक नागरिक पाए भने दाउ हात पार्ने (भ्रष्टाचार गर्ने) मौकाको पर्खाइमा बसेका हुन्छन् । यसरी बहुसङ्ख्यक नागरिकमा बोली र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा । केवल कुराद्वारा मात्र भ्रष्टाचार विरोधी भएर बहुसङ्ख्यकले आफू इमानदार भएको तर्क पेश गर्छन् तर भ्रष्टाचार गर्ने अकिन हुन्छ नेपालको गरिबी अति पीडादायी? नेपालमा, कुराकानीको क्रममा, लगभग सम्पूर्ण जनताले नै घुसखोरी वा भ्रष्टाचारको विरोध गरेको पाइन्छ तर व्यवहारद्वारा भने केवल पााच प्रतिशत (अनुमान) मात्रले यो कुरुति वा अपराधको विरोध गरेको देखिन्छ। अर्थात वहुसंख्यक नागरिकहरु पाए भने दाउ हात पार्ने (भ्रष्टाचार गर्ने) मौकाको पर्खाइमा बसेका हुन्छन्। यसरी वहुसंख्यक नागरिकमा बोली र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा। केवल कुराद्वारा मात्र भ्रष्टाचारको बिरोधी भएर वहुसंख्यकले आफू इमान्दार भएको
लम्बिदो मधेस आन्दोलन र नेपालको भविष्य
विनोद गुप्ता दशैं सिद्धियो तर हाम्रो दशा सिद्धिएन । यो कहिले सिद्धिने हो भन्न सकिने अवस्था समेत देखिइरहेको छैन । दशा दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा आन्तरिम र अर्को बाह्य । आन्तरिक दशा आपैंmले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने बाह्य दशाको व्यवस्थापन गर्न आपैंmलाई बाह्य दशा अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । व्यवस्थापनको मूलभूत सिद्धान्तलाई आधार मानेर देशको वर्तमान अवस्थाको मूल्याड्ढन गर्दा हामीले भोगिरहेको वर्तमान अवस्था हाम्रो आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । महाभूकम्प बाह्य कारण थियो । त्यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको क्षति न्यूनीकरण थियो । त्यो अपेक्षा अनुरूप हामीले गर्न सकेनौं किनभने त्यस्तो आपदाको लागि सेमिनार र कार्यशाला प्रशस्त भए पनि कार्यगत तयारी थिएन । त्यसैले सेना र प्रहरीको अनिवार्य अ·को रूपमा रहेको विपत व्यवस्थापन अनुसारकै कार्यहरू मात्रै हुन सके । तर वर्तमान समस्या विशुद्ध आन्तरिक हो किनभने यसको उत्पत्ति नेपालभित्र नै भएको छ । एउटै देशको नागरिकसँग दुईथरी व्यवहार गर्ने मानसिकताले यो समस्या डाकेको हो भन्दा फरक नपर्ला । किनभने संविधानको मस्यौदामा नै जनमत सड्
इन्धन समस्याको विकल्प
जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानलाई नेपाली शासकवर्गले जहिले पनि चरितार्थ गर्ने गरेको छ । अहिले जुनसुकै कारणले होस्, इन्धनका लागि एक मात्र भारतमाथि निर्भर नेपाल चीनबाट इन्धन मगाउने प्रयासमा जुटेको छ । यस्तो प्रयास पहिले पनि भारतीय नाकाबन्दीको बेला सरकारले नगरेको होइन । २०४६ सालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा सिंगापुरबाट हवाईजहाजमा इन्धन ल्याइएको थियो । त्यति बेला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ मगाउन एउटा बृहत् योजनामा काम पनि प्रारम्भ भएको थियो, तर भारतले नाकाबन्दी खोल्नेबित्तिकै तमाम योजना र रणनीति भताभु· भएको थियो । जोरी पनि खोज्ने र हुति पनि नदेखाउने सरकारहरूको आचरणले नेपालले लज्जास्पद स्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने नेपाली जनताले घरीघरी यस्तो अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतबाहेक चीन वा अन्यत्रबाट इन्धन मगाएर काम चलाउनु अल्पकालीन समाधान हो, यसले दीर्घकालसम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन । किनकि यो महँगो मात्र पर्दैन, आवश्यक मात्रामा पाउन पनि कठिन हुन्छ । चीन एउटा उदीयमान विश्व शक्ति राष्ट्र हो, उसलाई आफैं इन्धनका लागि अरूमाथि निर्भर रहनुपर्छ । मित्रताको ख्याल
२०७२ कात्तिक १० गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
आन्दोलनको ७३ औं दिन र नाकाबन्दीको ३३ औं दिन मितेरी पुलमा सरसफाइ तथा औषधि वितरण
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ मधेस आन्दोलनको ७३ औं र नाकाबन्दी ३३ औं दिन मितेरी पुलमा धर्ना आज पनि जारी छ । बारा र पर्साबाट आएका व्यक्तिहरू धर्नामा सहभागी भएका छन् । आज दिनभरि पार्टीको काम सकाएर साँझ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो धर्नास्थल पुगेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय समावेशी मोर्चाको आह्वानमा मितेरी पुलमा भएको नाकाबन्दी सफल बनाउन आज बारा जिल्लाको रामपुर टोकनी, भलुही टोलका नेपाल मुस्लिम रिलिफ सोसाइटीको अगुवाइमा विशाल जुलुस मितेरी पुलमा पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । ट्रक, बसमा आएका बारावासीले मधेसको मागप्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै अधिकार नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने दृढता प्रकट गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । त्यसैगरी नाकाबन्दी स्थलमा बिहान विभिन्न किसिमको योगासन शुरु गरिएको थियो । धर्नास्थलमा निश्शुल्क औषधिसमेत वितरण भइरहेको छ । बढ्दो चिसोको कारण अहिले नाकाबन्दी स्थलमा बस्नेहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । गाउँ–गाउँबाट मानिसहरू झूल, ओढ्ने लिएर आउने गरेका देखिन्छन् । प्रस, रौतहट/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा आयोजि
दसगजा क्षेत्रमा शौचालय र धारा निर्माण
प्रस, वीरगंज, ९ कात्तिक/ संयुक्त मधेसी तथा जनजाति सञ्जालको अगुवाइमा आजदेखि मितेरी पुलमा शौचालय तथा धारा निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सञ्जालले हिजोदेखि शुरु गरेको स्वेच्छिक चन्दा सड्ढलनबाट धारा जडान गर्नुको साथै सो स्थानमा चर्पी निर्माण गर्न थालिएको छ । विगत लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दै आएका मधेसी समुदायलाई शौचालय र खानेपानीको अभाव भएपछि दुई महिनापछि सञ्जालले अभियान चलाएको थियो । अभियानको क्रममा हिजो सरसफाइसमेत भएको थियो । सोही क्रममा खानेपानी र शौचालयको आवश्यकता रहेको कुरा उठेपछि युवाहरूले मितेरी पुलमा आवतजावत गर्ने सबैजनासँग स्वेच्छिक चन्दा सड्ढलन शुरु गरेका छन् । सोही रकमबाट शौचालय तथा धारा निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
जइतापुर र पिपरा विजयी
प्रस, परवानीपुर, ९ कात्तिक/ बारा, भोडहा गाविसमा जारी भोडहा नकआउट फूटबल प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा जइतापुर क्लब विजयी भएको छ । भोडहा गाउँको खेलमैदानमा भइरहेको खेलमा आज जइतापुरले मनहर्वालाई शून्यविरुद्ध १ गोलले पराजित गर्‍यो । जइतापुरबाट एक मात्र निर्णायक गोल उपेन्द्र महतोले गरेका थिए । यसै बीच आइतवार सम्पन्न खेलमा रामजानकी युवा क्लब पिपरा, उमजनले जीत हासिल गरेको छ । जन युथ क्लब बोधवनलाई १–२ गोल अन्तरले पिपराले जीत हासिल गरेको सो प्रतियोगिता आयोजक समिति सदस्य साबेर आलमले प्रतीकलाई जानकारी गराए ।
टी–ट्वान्टी नकआउटको उपाधि सतवरियालाई
पप्पु सुमन, पोखरिया, ९ कात्तिक/ बडा दशैंको उपलक्ष्यमा पोखरिया क्रिकेट टीमले आयोजना गरेको टी–ट्वेन्टी नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सतवरिया क्रिकेट टीमले जित्न सफल भएको छ । पोखरिया नगरपालिका कार्यालय र नवदुर्गा पूजा समिति पोखरियाको संयुक्त सहयोग तथा श्री जिल्ला उच्चा·ल रामदेव कलवार उच्च मावि पोखरियाको खेल मैदानमा पोखरिया क्रिकेट टीम र सतवरिया क्रिकेट टीमबीच आज भएको फाइनल खेलमा आयोजक पोखरिया टीमलाई हराउँदै सतवरियाले उपाधि हात पारेको हो। निर्धारित बीस ओभरको खेलमा सतवरियाले टस जिती आठ विकेट गुमाई एक सय पैंतीस रन बनाएको थियो । एक सय छत्तीस रनको विजयी लक्ष्य लिएर खेल मैदानमा ओर्लेको पोखरिया, उन्नाइस ओभर दुई बलमा चौरासी रनमा सबै खेलाडी समेटिएपछि सतवरिया एकाउन्न रनले उपाधि जित्न सफल भएको मैचका कमेन्टेटर अब्दुल आलमले प्रतीकलाई बताए । आजको खेलको मैन द मैच सतवरियाका नसरूद्दिन आलम भएका थिए । प्रतियोगितामा आफ्नो टीम लाई एक सय पाँच रनको योगदान दिनुको साथै नौ विकेट लिने पोखरियाका कौशल साह गोढ मैन अफ द सिरिज घोषित भएका थिए । खेलमा प्रथम र द्वितीय हुने टीमलाई क्रमश: छ हजार, तीन
नयाँ संविधान र नागरिकताको प्रावधान
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा ती महिलाले नागरिकता पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? निजबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँछ भने कुन श्रेणीको ? तराई–मधेसमा विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने प्रचलन व्यापक रहेकोले यस्ता जिज्ञासा र चिन्तन हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता जिज्ञासाबाट आम जनतामा संवैधानिक प्रावधानबारे व्यापक सचेतना नभएको बुझ्न सकिन्छ । जसले द्विविधा एवं भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। जनताको उपरोक्त जिज्ञासाको संवैधानिक जवाफ दिनुका साथै वर्तमान संविधानिको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक विशेषणको खाँचो छ । नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कुरा गर्दा २०४७ र २०६३ को संवैधानिक प्रावधान भन्दा केही हदसम्म वर्तमान संविधान फराकिलो छ । २०४७ को संविधानमा संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले व